Semalt Inoratidza Kufuridzirwa kweCTA Buttons Guideline
Paunenge uchiita e-commerce, kugadzirisa kwehuwandu hwewebhu pahutanokutsvaga injini kuonekwa chinhu chinokosha. Makambani akawanda akabudirira paIndaneti kuburikidza nekushandiswa kwakanaka kweSEO nedzimwe digitalmaitiro ekudhinda. Zvinhu zvakadai sokusarudza kwehupenyu uye kugadzirwa kwekodhi zvakakosha pakusarudza kuti peji yewebhu ichazvibata seipane SERPs. Kutevera kushandurwa kwaJanuary 2017 kweGoogle algorithm, zvinhu izvo Google inopa kuwanda kwemazuva ano zvinogutsikanakukoshesa, kushamwaridzana neshamwari, uye ruzivo rwevashandisi.
Mukushanda kwevashandisi, Max Bell, Mutengi weKuchengetedza Muteereri we Semalt Digital Services, inokurudzira zvinotevera:
A web design iyo inofungidzira ziso romunhu.
Kusununguka kwekufamba (kune pfungwa huru) - gerenciador de finanas.
Nhauriro inofanirwa nechinangwa chomunhu kana chidimbu
Maererano nezvikonzero izvi, ruzivo rwekushandisa webhusaiti rinofanira kuva chiyikunetseka paunenge uchivandudza web content. Somugumisiro, mabasa eCTA anovaka chido chakakura chokutarisa kuti kuisa mabhii anokosha. Formuenzaniso, kudana-ku-action mabhatani. Iri bhatani rinokurudzira mushanyi kuti aite basa rinokosha pane peji yewebhu sekutenga, bvumakana download. Iwe unogona kushandisa mazano pasi apa kuti uite CTA kuiswa kunogona kuva basa rakanyanya:
CTA kuiswa panzvimbo inofanira kuenderana nekugadzirwa kwewebhu peji. IU inofaniraRamba uchiita seunyanzvi hwepamusoro sezvinobvira pamwe neCTA..Zvimwe zvigadzirwa zvingada kuisa bhosi riri pamusoro pechipfu uye vamwe pasi payo. Mune imwematambudziko, kureba web page rinosanganisira CTA kumusoro nepamusoro peji. Mapeji mashomanana ewebhu ane zvigadziri zvishoma kuti aise fonibhatani rechiito.
2. Desktop uye nhare dzemajeri
Maererano nehuwandu hweJanuary, Google ichave ichiri kutarira kunekushamwaridzana kweshamwari kwewebsite. Paunoita SEO, pane zvimwe zvigadziro zvaunoshandisa pane imwe foni uye kwetepane desktop. Somuenzaniso, urefu hwehupenyu. Maererano nekutsvakurudza, vazhinji vashandisi vepa desktop vanosarudza pasi yakasimwa CTA. Muchidzidzo chakafanana, vanhu vanoona zviri nyore kuita CTA chiito pane foni yes mobile kunyanya kana bhata reCTA riri pamusoro peji.
3. Kuruboshwe kana kurudyi
Muzviitiko zvizhinji (kana zvisingaiti), mabhii-kuita-maitiro anobatira vatengiapo paine chikamu chakanaka cheji yewebhu. Maererano nezvakaonekwa, munhu anoshandisa shopper, achatsvaga peji pamagumo kana kumusorocorner. Izvi zvinoratidzira vanhu vanoita webhupu yekufambisa. Mafoni efoni ane ruzivo rwekuisa mifananidzo kuruboshwe, iyo inobvumiranokuda kwekwangwani rworudyi.
Paunoita e-commerce, zvakasiyana-siyana zvewebhu web design SEO nebhokisikuiswa kunotora basa rinokosha. Nzvimbo yepawebsite yakanaka inogona kukwanisa kushanyira mushanyi kune mutengi kuburikidza nehukuru hwezvinhu zvewebsite. Apo amushanyi anonyanya kubatanidza hukama hwako, chirongwa cheAIDA (Chenjerera - Kufarira - Chido - Chiito). Iyi nzira inofanira kukutungamirira kuburikidza nenzvimbo iwekuisa mabhii anodiwa akadai seTito-To-Action mabhodhi. CTA mabhatani anogona kutora nzvimbo dzinonyanya kuoneka mukati pewebhu rako. Iyi nzvimboinosanganisira nzvimbo dzakadai mukati mepeji kana nzvimbo yakakodzera yevashandi vanofambisa. Chirongwa chisina kukwana mberi chingaita kuti iwe urege kurasikirwamigwagwa, kukuvadza SEO kuedza kwako. Uchishandisa mazano aya ekugadzirisa CTA, kutendeuka kwako kunogona kukura zvikuru.